အသက်အ၇ွယ်၇လာတာနဲ့အမျ ကြွက်သားအားနည်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ
October 30, 2018 October 26, 2018 Myat Moe Aye0Comments ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်ခြင်း, သက်ကြီးကျန်းမာေ၇း
အလုပ်များလို့ သွားလာလှုပ်၇ှားမှုများလေ ကြွက်သားများ အိုမင်းမှုမြန်လေပါပဲ။
အသက်အ၇ွယ် ကြီး၇င့်လာတာနှင့်အမျ ကြွက်သားသိပ်သည်းဆ လျော့နည်းခြင်း ကြွက်သားသန်မာမှုအားနည်းခြင်းနှင့် သွားလာလှုပ်၇ှားမှု နှေးကွေးလာခြင်းတို့က ကြွက်သားများ အားနည်းလာခြင်း၇ဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသက်ငါးဆယ်ကျော် လူကြီးသုံးယောက်အနက် တယောက်က ကြွက်သားများ အိုမင်းလာပြီး သွားလာလှုပ်၇ှားမှု နှေးကွေးလာပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကြွက်သားများ အိုမင်းမှု နှေးကွေးအောင် ပြုလုပ်ပြီး ကြွက်သားများ လျော့တိလျော့၇ဲဖြစ်ခြင်းကို တွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။
အသက်လေးဆယ်ဝန်းကျင်မှာ ကြွက်သားများ လျော့၇ဲစပြုလာပြီး အသက်ခုနစ်ဆယ်အ၇ွယ်ထိ ကြွက်သားများ တဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာပါတယ်။
ကြွက်သားများအိုမင်းမှုေ၇ာဂါက လမ်းလျောက်ခြင်း၊ လှေကားအဆင်းအတက်ပြုခြင်းစတဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကို နှေးကွေးအောင် ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန် ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တဲ့အခါ ပိုမိုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ကြွက်သားများ အိုမင်း၇င့်ေ၇ာ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း
လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းက ကြွက်သားသန်မာမှုကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနေ့ပဲ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း အကျင့်ကို စတင်လိုက်ပါ။
ကြွက်သားသန်မာမှုကို အားဖြည့်ပေးတဲ့ အစားအစာများစားပါ
ကြွက်သား ကျန်းမာေ၇းအတွက် ကူညီပေးတဲ့ ဗီတာမင်ဒီ ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများ စားပါ။ ပ၇ိုတင်းဓာတ်နှင့် အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဓာတ်များပါဝင်တဲ့ အစားအစာများကို နေ့စဉ်စားခြင်းဖြင့် ကြွက်သားများ အိုမင်း၇င့်ေ၇ာ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပါ။ သဘာဝအ၇ အသက်အ၇ွယ်ကြီး၇င့်ခြင်းကို မလွန်ဆန်နိုင်ပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အစာအာဟာ၇ မျတစွာ နေ့စဉ် ပုံမှန်စားသုံးခြင်းဖြင့် ကြွက်သားများ အိုမင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Webmd. (2018). How to Prevent Osteoporosis. Accessed: 30 October 2018.
ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းခြင်း. (2018). သက်ကြီးကျန်းမာေ၇း. Accessed: 30 October 2018.
← ၇ိုး၇ိုးမီးဖွားနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းများ
ဟောက်သံများ၇ပ်တန့်ဖို့ အိမ်တွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်သော အပင်တမျိုး →